Ụlọ Ọrụ Mmụta Forex | FXCC
Ka ị na-amalite njem njem gị, ọ dị oké mkpa iji mara
na uru nke ahịa ECN, anyị nọkwa ebe a iji nyere gị aka.
Kedu ihe ị chọrọ ịma mgbe ị na-ere Forex
Chọpụta isi ihe ndị a dị mkpa ma nyefee onwe gị n'aka ịkwado ndị ahịa maara ihe
Mụta ihe kpatara ECN bụ ọdịnihu nke ahịa ahịa Exchange.
Kedu ihe dị iche n'etiti ụdị abụọ ahụ na uru ECN na-ewetara ndị ahịa?
Ghọta ụzọ abụọ nke ego abụọ na àgwà ha.
Ịghọta rollover dị oké mkpa iji mee ka nyocha gị ziri ezi.
Mụta mgbe ọ ga-eme ka mwepụ gafee na ụzọ ọ ga - esi emetụta ahia.
Gini mere o ji di nkpa ighota echiche nke oke mgbe ahia Forex?
Ndị na-eduzi ndị ọrụ
Mụta otu esi eduzi azụmahịa na FXCC ma ghọta ngwaahịa anyị.
Akwụkwọ eBooks nke Forex
Meziwanye ahia gị na nhọrọ nke ederede ndepụta, na-enye nduzi na nghọta nke usoro echiche aghụghọ
BUTARA OKWU eBOOKS
Mepee Akaụntụ ECN Taa! Malite ahia na onye na-agba ahia na akụkụ gị!
Kedu ihe na-eme njem ahụ? Mụta ihe gbasara akụ na ụba ụwa nke na-emetụta ndị ahịa.
A na-etinye ego dị ukwuu n'ime ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ebe a
iji hụ na ọ nwere ihe dị iche ma mee ka ndị ahịa anyị mara ihe.
- Ntọala Ebere Forex - Nnyocha nyocha Forex - Atụmatụ Forex
Nkuzi ahia ahia ahia
- Ndị na - amalite - Etiti
- Gaa na Omuma
Nweta azịza nye ajụjụ ndị a na-ajụkarị banyere ụdị azụmahịa anyị ma ọ bụ ịzụ ahịa n'ozuzu ya.